Biography nke Georges Cuvier, nna ntọala nke paleontology | Netwọk Mgbasa Ozi
Biography nke Georges Cuvier
N'etiti ndị ọkà mmụta sayensị kachasị mma nke meworo ka akụkọ ihe mere eme nke sayensị ka mma, ọ dị otu onye n'ime ha nke nwere nsọpụrụ niile ebe ọ bụ otu n'ime ihe atụ kachasị ama n'oge niile. Anyị na-ekwu maka ya Georges cuvier. Ọ bụ ndị ọkà mmụta sayensị nyere aha ya paleontology na comparative mmewere. Ihe omuma ya ka ekwuputara na uwa nke sayensi ma gaa n'ihu n'ọtụtụ ebe site n'oge o bidoro rue ugbu a.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ị na-eme na akụkọ ndụ Georges Cuvier
1 Mmalite nke Georges Cuvier
2 Nhazi nke ala umu anumanu dika Georges Cuvier si kwuo
3 Onye guzobere paleontology
Mmalite nke Georges Cuvier
Dị ka ndị ọkà mmụta sayensị niile, nwoke a nwere mmalite mbụ ya. Aha ya bu Georges Leopold Chrétien Frederic Dagobert, Baron de Cuvier, amuru ya na obodo Montbéliard, na France, n’abali iri-abuo n’ato n’onwa asato, 23. Site na mgbe odi nwata o gosiputara nnenne mmasi na uwa ihe ekere uwa na uche oma. Anyị amataworị na mgbe anyị raara onwe anyị nye na ihe anyị hụrụ n'anya nke ukwuu, anyị nwere ike ị nweta nloghachi ka ukwuu na nchọta n'onwe anyị na enyemaka nke ndị ọzọ.
Nwoke a nwere obi uto banyere ihe okike ma gbakwunye ya ihe omuma. N'ihi nke a, n'ime afọ nke mgbanwe French dịgidere, Georges Cuvier tinyere onwe ya n'ịmụ banyere mmebe nke mollusks iji mee ka ihe ọmụma ọ chọrọ banyere akụkọ ihe mere eme na usoro ihe atụ. Ọ kwụsịghị tupu tiori dị ukwuu mana ọ chọrọ itinye omume ahụ ngwa ngwa o kwere mee. N'ụzọ nke a, yana oke agụụ maka ihe o mere, na 1795 o jisiri ike nweta ọrụ na Museum of Natural History na Paris.
Nke a bụ nnukwu nzọụkwụ maka nwoke a ebe ọ bụ na mmata ya mere ka a kpọọ ya aha ka ọ bụrụ odeakwụkwọ na-adịgide adịgide nke Ahụike na Ahụike nke National Institute. N’ebe ngosi ihe mgbe ochie a o nwere ike ịmụ omimi n’otu akụkụ ahụ dị iche iche dị ndụ. Iji mee nke a, ọ ghasasị puku kwuru puku na ụmụ anụmanụ ka ọ na-enyocha ọkpụkpụ niile iji chọta azịza gbasara evolushọn na mmekọrịta dị n'etiti ụdị nke sayensị amabeghị ruo ugbu a.
Anyi aghaghi icheta na usoro sayensi n'oge a di iche na taa. Taa, anyị nwere nnukwu ọdụ data nwere ihe ọmụma bara uru ma zuru ezu na narị otu narị na narị puku ụmụ anụmanụ na osisi. Abia na imuta ihe banyere ihe, anyi nwere owuwu nke anyi wuru ntoala ya. Ọrụ Georges Cuvier bara uru karịa ka ọ nwere n’otu n’otu inwe nkewapụsị anụmanụ ndị a nile iji mụọ otu ihe n’ahụ ha.
Nhazi nke ala umu anumanu dika Georges Cuvier si kwuo
Ihe omumu nile nke Georges Cuvier mere na oge mgbanwe nke French mere ka o nwee ike ichikota ala umu anumanu site na ịgbasa na imezi usoro Linnaean. Ihe omuma nke enwetara ma gosiputa na ihe omumu ya puru imebi ihe ekwere na mbu na anumanu bu uzo nke ihe naga niru. Usoro a na-aga n'ihu site na anụmanụ kachasị dị mfe na mmadụ, nke ikpeazụ bụ ihe dị mgbagwoju anya.
Ọkà mmụta sayensị a chịkọtara ụmụ anụmanụ ala dịka ihe ọ hụrụ n'ọfụma gbasara usoro ihe ọmụmụ ya. N'ụzọ dị otú a, o kewara alaeze ụmụ anụmanụ na ụdị 4 dị iche iche: ndị na-egbukepụ egbukepụ, ndị a na-ekwu okwu, ndị na-akpụ akpụ na ndị na-emepụta ihe. Basiczọ ndị a dị mkpa bụ ihe mere ka ihe dị iche na mmepe sayensị. Ọ bụ na nkwupụta na akụkụ ahụ nke anụmanụ na-metụtara onye ọ bụla ọzọ na-eme achikota dum.
Ọ bụ ezie na nke a dị ka ihe ezi uche dị na ya taa, Georges Cuvier bụ onye mbụ nwere ike ibuli ma kọwaa ya na sayensị. Ọ bụ echiche a ma ọ bụ nke na-enyere aka ịnye ntọala maka nchọpụta Darwin na-esote iji tụgharịa uche na ntopute nke ụwa dị ndụ.
Onye guzobere paleontology
Dịka anyị kwurula na mbụ, Georges Cuvier ọ bụ nna a tọrọ ntọala nke paleontology. Ma ọ bụ na ọ rụrụ ọrụ dị mkpa na mmepe nke sayensị a n'ihi ụkpụrụ ya banyere mmekọrịta dị n'etiti nhazi na ọrụ na anụmanụ. O nwere ike iwughachi ọkpụkpụ nile nke ụmụ anụmanụ na-achọ ka ọ nweghị iberibe ya niile. Nke a nwere nnukwu uru n'oge a hụrụ ya ebe ọ bụ na, dịka anyị kwurula na mbụ, n'oge a enweghị ọdụ data nke ndị dị ndụ.
Ọ bụ ya na-ahụ maka ịmụ ọtụtụ ihe mgbe ochie na ha jere ozi iji gosi ụwa niile na ụwa dị iche iche bi na mbara ụwa ọtụtụ narị afọ. Nke a gosiri nnukwu ihe dị na ọrụ ya wee mee na 1812. N’afọ a, o mere ka ndị sayensị mata ihe dị n’anụmanụ na-efe efe na-efe efe, ihe a na-agaghị ahụ n’ozuzu ya na mbụ. Ihe na-akpụ akpụ bụ M na-akpọ ya Pterodactylus na ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma mara prehistoric reptiles n'ụwa. Ihe agbakwunyere na nke a bụ ngosipụta mbụ nke ọkpụkpụ ọkpụkpụ nke enyí, ugbu a agwụla, nke rụworo ọrụ nke na taa Georges Cuvier bụ nna nna ntọala paleontology.
N’agbanyeghị ihe ndị ọ chọpụtara na ihe ọ na-eme, ọ kwadoghị evolushọn. N'etiti echiche ya, o kesara nke catastrophism. Ozizi a na-atụ aro na mkpochapu ọ bụla kpatara ọdachi ụwa niile nke usoro okike nke ọhụụ ọhụrụ na mbara ụwa na-esochi.
Ihe onyinye niile onye sayensị a nyere emeela ka e lere ya anya dị ka otu n'ime ndị kachasị ama n'oge ya. Ọ natara ọtụtụ ihe ndozi na nkwupụta sitere n'aka ndị sayensị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke oge ya. Ọ nwụrụ na May 13, 1832 na Paris site na ọgbụgbọ na ọnyụnyụ. Edere aha ya na ndi oke okacha amara nke oge a na Eiffel Tower.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmatakwu banyere ọkà mmụta sayensị Georges Cuvier.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Biography nke Georges Cuvier
Ihe niile ịchọrọ ịma banyere mbara igwe